अभियान जनमत : छिटो विकास होस् भनेर ठूलो बजेट ! | गृहपृष्ठ
Home समाचार अभियान जनमत : छिटो विकास होस् भनेर ठूलो बजेट !
on: २ बैशाख २०७६, सोमबार १९:३३ समाचार
अभियान जनमत : छिटो विकास होस् भनेर ठूलो बजेट !
वैशाख २, काठमाडौं (अस) । नयाँ वर्षको शुभारम्भ भइसकेको छ । अब नयाँ आर्थिक वर्ष (आव) पनि नजिक आउँदै छ । सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट ल्याउने गर्दछ । तर सरकारले घोषणा गरेको बजेट लक्ष्य अनुरुप खर्च गर्न सकिरहेको छैन । अघिल्लो वर्षकै बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकार हरेक वर्ष अंक बढाउनकै लागि भएपनि पहिलेकोमा थपेर बजेट ल्याइरहेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको आँकडा हेर्ने हो यो अवधिमा बजेटको आकार दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । आव २०७१/७२ मा रू. ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट ल्याइएको थियो भने चालू आव २०७५/७६ का लागि सरकारले रू. १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । यद्यपी सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षामा समग्र बजेट खर्च रू. ११ खर्ब ९९ अर्ब मात्रै हुने प्रक्षेपण सरकारले गरिसकेको । यो कुल बजेटको करीब ९२ प्रतिशत हो । गत आवमा रू. १२ खर्ब ७८ अर्बभन्दा बढीको बजेट घोषणा गरेको सरकारले रू. १० खर्ब ८४ अर्ब मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो ।
शुरुमा घोषणा गरिएको बजेटमा समग्र बजेट खर्च ९० प्रतिशत पुग्न पनि मुस्किल हुने गरी ठूलो अंक दखाउने र पछि अनेक बाहना देखाएर खर्च गर्न सकिएन भन्ने गरिएको छ । फेरि अर्को वर्ष पहिलोभन्दा थप गरेर बजेट भाषण गर्ने गरिएको छ । यो प्रवृत्ति हरेक वर्ष दोहोरिइरहेको छ । तर सरकारले बजेटको समीक्षामा विगतमा बजेट खर्च गर्न नसकिनुको वास्तविक कारण पत्ता लगाएर बजेटको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने प्रयास गरेको भने देखिँदैन । जसले गर्दा सरकार लक्षित उपलब्धि हासिल गर्नबाट चुकिरहेको छ र ८० प्रतिशत हाराहारीको बजेट खर्च गरेर सन्तोष मानिरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा हामीले आर्थिक अभियानको नियमित प्रस्तुती अभियान जनमतमा गतसाता ‘आधा पनि खर्च हुन सक्दैन भन्ने जान्दा–जान्दै र देख्दा–देख्दै पनि बजेट किन ठूलो बनाइन्छ होला ?’ भनेर सोधेको थियौं । जनमतमा सहभागी अधिकांशले ‘छिटो विकास होस् भनेर’ ठूलो बजेट बनाइएको बताएका छन् । यसमा ७८ प्रतिशत सहभागीको मत परेको छ । यसैगरी १४ प्रतिशतले ‘जनतालाई देखाउन’ बजेट ठूलो बनाउने गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने ८ प्रतिशतले चाहीँ ‘आफ्नो क्षमता आफैंलाई थाहा नभएर’ भन्नेमा मत दिएका छन् ।
यो साता अभियान जनमतका लागि प्रश्न छ, ‘महालेखापरीक्षकको कार्यालयले वर्षेनी दिएका सुझाव सरकारले कार्यान्वयन नगर्नुलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?’
१) एकैपटक धेरै सुझाव दिन्छ, कसरी कार्यान्वयन गर्नु ?
२) महालेखाको अबहेलना
३) आफ्नै मान्छेको गल्ति देखिने भएर
आर्थिक अभियानको वेबसाईट www.abhiyan.com.np मा रहेको अभियान जनमत शीर्षकमा गएर अभियान जनमतमा सोधिएका प्रश्नमा आफ्नो मत राख्न सकिने छ । उक्त जनमतको अन्तिम परिणाम आगामी साता प्रकाशित गरिने छ ।
६ बैशाख २०७६, शुक्रबार ०७:२५
भ्रमण वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत
अभियान जनमत : विदेशी लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधार भइरहनुपर्छ
२४ चैत्र २०७५, आईतवार १८:२९
अभियान जनमत : जनकपुर–जयनगर रेल्वे विस्तार हुनेमा शत प्रतिशत विश्वस्त
१७ चैत्र २०७५, आईतवार १७:५१